Otu esi etinye Mono Framework na Linux Mint 20 - LinuxCapable
October 25, 2021 by Jọshụa James
Otu esi emelite Mono
Otu esi ewepu (wepụ) Mono
N'ime nkuzi a, ị ga-ama otu esi etinye ma hazie Mono na sistemụ Mint 20 Linux gị.
A ga-achọrọ ndabere ndị a iji wụnye ma mee Mono nke ọma na sistemụ gị. Mepee ọdụ iwu gị wee mee iwu a ka ịwụnye wee lelee ma etinyere ha.
Akụkụ mbụ nke nrụnye ga-abụ ibubata igodo GPG na ebe nchekwa. Site na ndabara Linux Mint ma ọ bụ Ubuntu nwere Mono na ebe nchekwa, yabụ ịwụnye ebe nchekwa gọọmentị ga-apụta na ị gaghị enwe naanị Mono mana ụdị kachasị ọhụrụ dị n'oge niile.
Mara, nke a bụ ebe nchekwa Ubuntu Focal. Agbanyeghị, ọ na-arụ ọrụ maka Linux Mint ka ọ dabere na ntọhapụ Ubuntu a.
Imelite Mono dị mfe ma jiri iwu dị mfe mee ya na ọdụ gị. Tinye ihe ndị a:
Ọ bụrụ na mmelite dị, jiri iwu nkwalite apt ọkọlọtọ ọkọlọtọ.
Ọ bụrụ n'ọdịniihu ịchọghị Mono na sistemụ arụmọrụ Mint Linux gị, mee iwu a:
Ị ga-enweta nsonaazụ na-esote na ewepụrụ Mono nke ọma na sistemụ gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ịwụnye usoro Mono wee mee obere mmemme mbụ gị na sistemụ Mint Linux gị.
N'ozuzu, Mono bụ nhọrọ dị egwu maka ndị mmepe nke na-agafe agafe na-enweghị akwụ ụgwọ maka ikikere ngwanrọ ma ọ bụ mkpọchi ndị na-ere ahịa yana ịbụ ebe mepere emepe. Naanị ihe dị njọ na Mono bụ na mgbe ụfọdụ API ya enweghị ike ịdị ka ọ dị ọhụrụ ozugbo mgbe ewepụtara ụdị ọhụrụ nke NET framework.
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Mono Mail igodo
Otu esi etinye asụsụ mmemme Rust na Linux Mint 20